အသက် ၂၄ - ED ပျောက်ကင်းသွားသည်။ အတွေ့အကြုံများကပိုမိုတောက်ပလာပြီးသင်၏အာရုံများသည်ပိုမိုနိုးကြားလာသည်။ - Porn တွင်သင်၏ ဦး နှောက်
ဒီဟာကရှည်လိမ့်မယ် အောက်ခြေတွင် TLDR မရှိပါ။ သို့သော်ကျွန်ုပ်၏အစီရင်ခံစာသည်ကဏ္sectionsများအဖြစ်ခွဲပါလိမ့်မည်။ ထို့ကြောင့်သင်နှင့်သင့်တော်သောအရာကိုရွေးချယ်နိုင်သည်။ ဤအပုဒ်သည် NSFW ဖြစ်သည်၊ သို့သော်မည်သည့်အရာကမှပြန်လည်ပြင်ဆင်မည်မဟုတ်သောကြောင့်အနီရောင်အပိုင်းများကိုသင်မဖတ်ပါကဤစာမူကိုမဖတ်ပါနှင့်။ သိပ်မရှင်းလင်းပေမယ့် ငါပြောသောအရာအချို့သည်အမျိုးသား fapstronauts များနှင့်သာသက်ဆိုင်လိမ့်မည်၊ သို့သော်ဤနေရာတွင်အမျိုးသမီးများအတွက်အသုံးပြုရန်တစ်ခုခုရှိလိမ့်မည်ဟုကျွန်ုပ်မျှော်လင့်ပါသည်။
Flatline: ငါရှိသောကြောင့် erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှု၏ဤ 90 နေ့ကကာလစတင်ခဲ့သည်။ ကျွန်မစတင်ရှေ့၌ငါတကယ်အနည်းငယ် flatlining ခဲ့ပါတယ်, ဒါပေမယ့်ငါတီထွင်ခဲ့ရုံအလေ့အထကြောင့်ငါ masturbating ထားရှိမည်။ Flatlines တစ်ဦးရောနှောကောင်းကြီးမင်္ဂလာရှိပါတယ်။ အဘယ်သူမျှမတသူတို့ကိုယ်သူတို့ castrate ဖို့ရှာဖွေနေ nofap မှကြွလာနှင့်တစ်ဦး flatline ကဲ့သို့ခံစားရအတိအကျအရာဖြစ်တယ်။ ဟုတ်ပါတယ်, သင့်ကိုယ်သင်သလောက်စုံစမ်းသွေးဆောင်ခြင်းကိုခံတှေ့ရပါဘူးကတည်းကကြောင့်ပိုမိုလွယ်ကူမယ့်ပေမယ့်သင့်ရဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုတန်ဖိုးထားဖို့ခိုင်မာတဲ့ထိုးနှက်သည်။ ကမ္ဘာကြီးဟာအရုဏ်မတတ်မီကမှောင်လာပြီအတိုင်းဤမွငျသငျသညျကွောငျ့, ED ၏ဒီမှာပါလျှင်, သင်၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ Self-လေးစားမှုဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကြောင့်မြင့်မားတဲ့မပေးကြောင်း, နားလည်ပါသည်။ ဒါဟာရှောက်သွားပါလိမ့်မယ်။ ငါတကယ်ကလျော့နည်းသဘာဝကျကျ pass ကိုကူညီမယ့် subliminal စာတိုပေးပို့ရေးတိပ်ဝယ်, မလွန်မယ်လို့မယုံကြည်ခဲ့ပါဘူး။ အဆိုပါတိပ်ခွေမကူညီခဲ့ဘူး။ Nofap အကူအညီနဲ့ပြုလေ၏။ သို့သော်နေဆဲ 90 ရက်အကြာတွင်စိုက်ထူငါ၏အတှေ့အကွုံကငါ masturbating အခါများကဲ့သို့ဖြစ်ခဲ့သည်အရာကိုအလွန်ကွဲပြားခြားနားသည်။ ကျွန်မနံနက်သစ်သား, မဟုတ်သည်နံနက်တိုင်းရ, ငါသည် 19 ခဲ့ကတည်းကတိုင်းနံနက်ကရှိခဲ့ကြပြီမဟုတ်။ ငါသာငါရထားပေါ်တွင်လှပသောဆံပင်ရွှေရောင်မိန်းကလေးဘေးတွင်ထိုင်နေစဉ်ထဲမှာ 55 ရက်ပေါင်းအကြောင်းကိုပိုကောင်းလာပြီသတိပြုမိသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ခြေထောက်ထိခံခဲ့ရခြင်းနှင့်ငါလိုသကဲ့သို့ငါထွက်ဆန့်ခဲ့ပါတယ်, သူနောက်ကျောကိုငါ့လက်မောင်းသို့မြှောင်ကြောင့်ငါ့လက်ရုံး, သူမ၏ထိုင်ခုံန်းကျင်တက်ခဲ့ပါတယ်။ ဒီလူစိမ်းမှလာမယ့်စီး၏ကြာချိန်အဘို့ခိုင်ခံ့စိုက်ထူ။ စိုက်ထူကောင်းသောအရာဖြစ်ကြ၏, သူတို့သင်တစ်ဦးရထားချွတ်ရမှတက်ရပ်နေင့်သည့်အခါကဲ့သို့ပင်အချိန်များတွင်မသက်မသာဖြစ်စေခြင်းငှါသော်လည်း, သူတို့သည်ပြဿနာတစ်ခုမစပ်ဆိုင်ကြောင်းကိုသတိရပါ။ သူတို့ကသင်တစ်ဦးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဖြစ်လျက်ရှိဖြစ်ကြောင်းဇီဝသက်သေဖြစ်ကြ၏။ သငျသညျ nofap နှင့်အတူကပ်လျှင်, သင့်သည့်သဘာဝဇီဝအပြုအမူတွေကိုသင်တို့ဆီသို့ပြန်လာပါလိမ့်မယ်။
Flatlines အခွင့်အလမ်းအဖြစ်ရှုမြင်ရပါမည်။ ဒါဟာလဲဖြစ်လိမ့်မယ်အဖြစ်ခက်ခဲရုံသင့်ရဲ့ဘောင်းဘီအတွင်း flaccid လျစ်လျူရှုပြီးကိုယ့်ကိုယ်အာရုံစိုက်ပါ။ သင့်အနေဖြင့်လာမည့်အပိုင်းပေါ်သို့ငါ့ကိုဆောင်တတ်၏သောယခုအပိုအချိန်ရှိသည်။
ကိုယ့်ကိုယ်ကိုကုသ: သငျသညျ masturbate အခါ, သင့်ကိုယ်သင်အပျြောအပါးပေးကမ်းကြသည်။ သငျသညျစာနယ်ဇင်း-ups ဝန်ပြုကြသောအခါ, အအေးရေချိုးခန်းထဲမှာရေပန်းကို ယူ. , အချို့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတှေးအထွက်ရဖို့နံရံတစ်ခုဆန့်ကျင်သည်သင်၏ခေါင်းကို bang, သင့်ကိုယ်သင်တိုတောင်းသောသက်တမ်းနာကျင်လျက်ရှိသည်။ သာရေတိုရေရှည်သင်သည် (ထို headbanging အကြံပြုကြဘူး) အတွက်သော်လည်းဤအမှုအရာရှိသမျှတို့ကိုအကောင်းရှိနိုင်ပါသည်။ ဒါပေမယ့်သင်ကသင့်ကိုယ်သင်ဒဏ်ခတ်, ကိုယ့်ကိုယ်ကိုမအနာပျောက်စေနိုင်သောဖြစ်ကြောင်းမှတ်မိဖို့အရေးကြီးပါတယ်။ ကောင်းစွာကိုယ့်ကိုယ်ကိုဆက်ဆံပါ။ သင်ပြုအမြဲလိုချင်တော့ပေမယ့်ကြိုးစားရန် GUTS ရှိသည်, ဒါကြောင့်မလုပ်ခဲ့ဘူးတစ်ခုခုကိုရှာပါ။ ငါ့အဘို့ကကခုန်လူတန်းစားယူပြီးခဲ့သည်။ ဒီတစ်ခါလည်း, သင်သည်ကောင်းစွာကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြုမူဆက်ဆံ up ပြုလုပ်စောင့်ရှောက်ပေမယ့်အရာ၏ညာဘက်ကြင်နာမယ့်သေချာစေရန်ပစ္စည်းပစ္စယများများလုပ်ပါ။ သငျသညျအချင်းချင်းစွဲကိုအစားထိုးမယ့်ဆိုရင်တော့သင့်ရဲ့ဒုတိယတစျခုကျန်းမာစွဲပါစေ။ အဲဒါကိုသင်ကပျော်မွေ့သေချာအောင်ဖြစ်ပါတယ်ဘာပဲယောဂ, ဘာဝနာ, ကခုန်, အားကစား, ပန်းချီ, အရေးအသား, ဓာတ်ပုံပညာ, ကြိုးစားနေရဲ့ရှိမရှိ။ သင်ကိုယ်တိုင်သင်သည်ကောင်းသော feeling နဲ့မဟုတ်ဘဲကိုယ့်ဟာကိုယ်ရေတိုရေရှည်သုတ်ရည်လွှတ်ခြင်းနှင့်ယာယီမြင့်မားစေပါတယ်တဲ့လမ်းကိုနှစ်သက်ပေးခြင်းထက်ပိုကောင်းတဲ့ဘဝ, ရှိခြင်းဖြစ်ပေါ်လိမ့်မည်ဟုတစ်လမ်းအတွက်အပျော်အပါးပေးခြင်းဖြစ်ကြောင်းကိုကြည့်ပါ။
အပြစ်သွေးဆောင်ရာ: သငျသညျသှေးဆောငျမှုရင်ဆိုင်ရပါလိမ့်မယ်။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအဘယ်အရာကိုမျှတူခံစားသူကိုပင် flatliners အစဉ်အဆက်ကိုထပ်သူတို့ကို excite မည်, သင်တို့ကိုစုံစမ်းသွေးဆောင်ခြင်းကိုခံရပါလိမ့်မယ်။ ငါကဒီမှာအပေါ်သွေးဆောင်မှုတိုက်ခိုက်နေ၏နည်းလမ်းများကိုလေ့လာသင်ယူကြသည်။ အသက်ပြင်းပြင်းရှူ, သင့်ဝမ်းထဲသို့အနည်းဆုံး 10, သင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်လှုပ်ရှားမှုကိုလျှော့ချပါလိမ့်မယ်။ အေးရေချိုးခန်းထဲမှာရေပန်း, ဒီမှာကအနည်းဆုံးရေတိုအသုံးအနှုန်းကကူညီကြလိမ့်မည်, သင်မူကားထပ်ခါတလဲလဲသွေးဆောင်မှုရင်ဆိုင်နေရပါတယ်လျှင်မူကား, သင်တဦးတည်းထက်ပိုယူနိုင်ပါသည်။ ဒီ reddit သွားမယ့်ပတ်ပတ်လည်ကိုဖတ်ရှုကူညီဖို့, ဒါမှမဟုတ်အကူအညီတောငျးတစ်ခုခုပို့စ်တင်နိုင်ပါတယ်။ သင်တစ်ဦးတုန့်ပြန်ဖတ်နေ၏မျှော်လင့်ချက်အတွက်တစ်မိနစ်အတွင်းစာမျက်နှာ 20 ကြိမ်လန်းဆန်းတက်အဆုံးသတ်စေခြင်းငှါ, ဒါပေမယ့်အနည်းဆုံးအားသငျ့စိတျရှိတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအာရုံပြံ့လှငျ့ဖြစ်ပါတယ်။
အဆိုပါရီးရဲလ်ကမ္ဘာ့ဖလား: အစစ်အမှန်ကမ္ဘာတွင်မဟုတ်ရှည်လျားလွန်းသည်ဤသို့သင်ကွဲပြားခြားနားသောပုံပေါက်ပေမည်။ ဒါဟာငါကောင်လေးကပထမဦးဆုံးအကြိမ်အဘို့ HD မှာကမ္ဘာကြီးကိုမြင်နေကဲ့သို့ဖြစ်၏ဟုဆိုသည်ရှိရာတဦးတည်းဖော်ပြချက်ဖတ်ကြှနျုပျအဘို့ကိုပြု၏။ အတွေ့အကြုံများတောက်ပဖြစ်လာကြဘူးနှင့်သင့်အာရုံကိုပိုပြီးတပ်လှန့်ခံစားရသည်။ ဒါပေမယ့်ကိုယ့်တစ်ဦးကို HD TV ကိုစောင့်ကြည့်ကဲ့သို့သင်သည်သဘာဝကျကျသောလောကဓာတ်သည်မည်မျှင်ဒါကြောင့်သင်တစ်ဦးအနေဖြင့်အပြီးသလောက်ကသတိထားမိကြဘူးနဲ့တူခံစားရရန်စတင်ပါ။ သင်တို့ဆီသို့ဆွဲဆောင်နေသောလိင်ကိုပိုပြီးဆွဲဆောင်မှုဖြစ်လာပေမည်။ ဒါကြောင့်ငါ့အဘို့အလုပ်လုပ်ခဲ့ပုံကိုပါပဲ။ ငါသည်သူတို့၏ဂုဏ်အသရေထက်ကနေ detracting တိုးမြှင့်အရာအဖြစ်ဆွဲဆောင်မှုအမျိုးသမီးတွေအတွက်အားနည်းချက်တွေကိုရှာဖွေတာတစ်ခု OTT perfectionist ဖြစ်ခြင်းကနေသွား၏။ ဒါဟာငါအချို့လမ်းထက်ဝန်းကျင်အခြားလမ်းချို့တဲ့ရသောအမှုသည်အခံရဖို့ TV နဲ့ကြော်ငြာအပေါ်ဆွဲဆောင်မှုအမြိုးသမီးမြားကိုတှေ့ရှိရာအမှတ်ရတယ်။ ကံမကောင်းစွာပဲ, ဒီကြောင်း၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကိုငါ့အမှားပါပဲပေမယ့်အတွေ့အကြုံ, အတန်ငယ်မကြာသေးမီကခြီထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။
Up ကို fuck ဆိုတဲ့: fuck ဆိုတဲ့တက်နှစ်မျိုးရှိပါသည်။ အဆိုပါသိသာတဦးတည်း, သင့်ကတိကဝတ်ကိုစောင့်ရှောက်ရန်ပျက်ကွက်နှင့်သင့်ကောင်တာနှင့်သိပ်မထင်ရှားတဲ့တဦးတည်းကို reset ရှိခြင်း။ inadvisable တစ်ခုခုလုပ်နေတာ, ကြောင်းကိုသင်၏ခရီးမကူညီမည်ဖြစ်ပြီးတက် fucking ရန်သင့်အားဦးဆောင်လမ်းပြစေခြင်းငှါ, ဒါပေမယ့်လုံးဝမပေးပါဘူး။ ငါသိသာတဦးတည်းရှောင်ကြဉ်။ သို့သော်အစောပိုင်းအပေါ်ကျွန်မအတော်လေးပျော်မွေ့နေတဲ့ညစ်ညမ်းမြင်ကွင်းတစ်ခုဖို့တေးသံခဲ့တဲ့သီချင်းနားထောင်တယ်။ လက်ျာဘက်သည်ငါ့ခေါင်းကိုအတွက်မြင်ကွင်းတစ်ခုထားပါ။ သီချင်းနားထောင်ခြင်းတစ်ခု inadvisable fuckup ဖြစ်ခဲ့သည်။ ဒါပေမယ့်ငါကကျော်ရတယ်။ အခုနောက်ပိုင်းမှာကျွန်မပိုပြီး inadvisable တစ်ခုခုပြုမိပါဘူး။ အကြောင်းကို 70 တစ်ခုခုရက်အကြာမှာကျေနပ်ရယူခြင်း, ငါသည်အမည်မသိ chatsite သွားလေ၏။ သင်တဦးတည်းကိုသုံးဖူးပါဘူးလျှင်သင်ဘာမှပျောက်ဆုံးမဟုတ်ပါဘူး။ ဗီဒီယိုကိုတွင်ပြုလုပ် 95% ယောက်ျား masturbating ရဲ့, ဒါပေမယ့်ကိုယ့်စာသားကိုအသုံးပြု chat ။ ငါ၏အ fapping ကာလ၌ငါအမျိုးသမီး (သို့မဟုတ်အမျိုးသမီးဖြစ်အခိုင်အမာသူတစ်ဦး) နဲ့လိင်ချက်တင်ရှိသည်ဖို့တစ်ဦးကျိုးကြောင်းဆီလျော် (ဥပဒေရေးရာ) အသက်ရှာနေအခြားယောက်ျားတွေအများကြီးနှင့်အတူဤ site ကိုသွားလေ့ရှိတယ်။ ငါသည်ဤ site ကိုမှပြန်လာသောအခါ, သောသူအပေါင်းတို့ကိုငါ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုမှာမဟုတ်ခဲ့ပေ။ ကိုယ့်ပျင်းကြီးနှင့်အချို့သောလူတို့နှင့်အတူပုံမှန်ချက်တင်ရှိချင်တယ်။ သငျသညျပုံမှန်ချက်တင်ရှာနေလျှင်ဤကိုသွားဆိုက်မဟုတ်ပါဘူး။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ငါမည်သူမဆိုအတူလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာချက်တင်ရှာနေပေမယ့်သေချာအလုံအလောက်ပြုလုပ်နောက်ဆုံးမှာကြောင်းလမ်းမယ့်စတင်မခံခဲ့ရပါကအလွန်ရှင်းပါတယ်ဖန်ဆင်းတော်မူ၏။ ထိုအခါငါပဲပြန်သွားပြီးရပ်ဆိုင်းခြင်းများနှင့်မလုံလောကျခိုင်မာတဲ့မဟုတ်ခဲ့ပေ။ ဒီတော့ငါ့အဘို့, တစ်ဦးတော်တော်လေးအဓိက fuckup ကြီးနဲ့ကျွန်မပြန်အတန်ငယ်ငါ၏အနာလန်ထူထားခံစားရတယ်။ ဒါပေမယ့်အနည်းဆုံးအားငါသင်ခန်းစာသင်ယူခဲ့တယ်။ သတိရပါ့ရှောင်ရှားရန် porn sites များမယ့်, ကစသည်တို့ကို facebook, youtube က, Craigslist, ဖြစ်စေခြင်းငှါ, သင်တို့တွင်အချို့သောအဘို့, သငျသညျတခုကျန်းမာရေးနဲ့မညီညွတ်တဲ့လမ်းအတွက်အသုံးပြုပါတယ်ကြောင်းယေဘုယျက်ဘ်ဆိုက်များင်
ပြည်သူ့ပြောနေ: ကျွန်မပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရငါသည်ဤလုပ်နေတာပေါ့ကိုသိသူမည်သူမဆိုကိုပြောသည်ကြပြီမဟုတ်။ ဘယ်ငါအတိတ်၌ငါ့တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေအလေ့အထများနှင့်ပတ်သက်ပြီးအလွန်ပွင့်လင်းသောကြောင့်, ကြင်နာ၏လိုက်တယ်ဖြစ်ပါတယ်။ မိသားစုနှင့်အတူ မှလွဲ. ။ ဒါပေမယ့်ကိုယ်ကတစ်စုံတစ်ဦးကိုပြောပြရန်ကူညီပေးနိုင်သည်ထင်ပါသလဲ, ကိုယ့်ကိုယ့်ကိုတကယ်အတူကသို့ရဖို့ရန်လုံလောက်သောအနီးကပ်ခံစားရမည်သူမဆိုရှိသည်မဟုတ်ကြဘူး, ငါကနည်းနည်းမူးတစ်ညခဲ့သောအခါငါနီးပါးငါ့အမိပြောပေမယ့်ငါထ sobered ။ မကသူတို့ကိုပြောပြရန်ဒါမကောင်းတဲ့ပါပြီသော်လည်း, သူတို့သည်ငါ၏မိဘများဖြစ်ကြောင်း။ ငါ၏အကုသ, သူတို့ကိုငါအရာရာပြောပြရန်မလိုပါ, ဒါပေမယ့်ကျနော်တချို့လူတွေကသူတို့ရဲ့မိဘတွေနဲ့အတူအလွန်ပွင့်လင်းဖြစ်ခြင်းမှအကျိုးကြောင်းနားလည်သဘောပေါက်ကြပါဘူး။ ထိုနေ့၏အဆုံးမှာကြောင့်တရားစီရင်ခြင်းကိုဖုန်းခေါ်ဆိုမှုဖွင့်ခြင်းနှင့်သင်မှတက်ပါတယ်။ သငျသညျလူမြိုးမှအချို့အနှုတ်လက္ခဏာတုန့်ပြန်ချက်ရဖို့လျှင်လျှင်မြန်စွာကြီးထွားလာဤအရပ်ဌာနရှိနေသော်လည်း, ဒီဘုံမဟုတ်ပါ, အံ့ဩခြင်းမရှိကြနှင့်။
အစွန်းရောက်: ဒါကနည်းလမ်းများစွာအတွက်အစွန်းရောက်ဖြစ်ပါတယ်။ ငါမကောင်းတဲ့အရာအဖြစ်မဆိုလိုဘူး။ ငါမည်သူမဆိုလူတိုင်းအတွက် porn အတော်ကြာ hard drive တွေဖို့ခါးတစ်ဦးတံတားပိတ်ထားခုန်တဲ့အစုလိုက်အပြုံလိုက်သတ်သေဦးဆောင်လမ်းပြမယ့်ဖွင့်မစဉ်းစားကြဘူး။ ခရစ်ယာန်ဘာသာတစ်အစွန်းရောက်အဖြစ်ထွက်စတင်ခဲ့ပြီးနှင့်တစ်ဦးကြီးစိုးအခန်းကဏ္ဍကယနေ့ကမ္ဘာ့ဇာတ်ခုံအတွက်ကစားသောအရာကိုကြည့်ရှုပါ။ ပိုကောင်းသို့မဟုတ်ပိုဆိုးသည်။ သာသနာရေးသေချာပေါက်မကောင်းတဲ့အမှုအရာမဟုတ်ပါ။ သင်တို့မူကားအပြည့်အဝသိပ္ပံနည်းကျကျောထောက်နောက်ခံရှိသည်ပါဘူး, သင်ယုံကြည်ခြင်းအပေါ်မှာအရာအခြို့ကိုယူပြီးဖြစ်ကြောင်းတစ်ဦးအသိုင်းအဝိုင်း၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ကြောင်းနားလည်ပါသည်။ သငျသညျ, ဒီမှာ7သို့မဟုတ် 30 သို့မဟုတ် 90 နေ့ကရုံးတင်စစ်ဆေးကာလတိုတောင်းသောသက်တမ်း လာ. , များစွာသော့ပြီးနောက်ပေါ်နေဖို့ဆွဲဆောင်လျက်ရှိသည်။ ဒီအကြီးအကျယ်တို့သည်ကြီးစွာသောအသိုင်းအဝိုင်းဖြစ်ပါသည်, ချောင့်ပေမယ့်သင်ပြုကဲ့သို့ကမ္ဘာကြီးကိုကျွန်တော်တို့ကိုတန်ဖိုးမထားဘူးကြောင်းအံ့အားသင့်ဖြစ်ပါဘူး။
ကွန်မြူနတီ: အဆိုပါရက်ကျော်သွားကြပြီသကဲ့သို့ငါဒီထက်နည်းတက်ကြွရပ်ရွာထဲတွင်ဖြစ်လာကြပါပြီ။ ငါအကောင်းတစ်ဦးအရာအဖြစ်ငါငါ့ကိုယ်ပိုင်အပေါ်အမှုအရာကိုကိုင်တွယ်နိုင်မယ့်နိမိတ်လက္ခဏာကိုဒီကြည့်ပါ။ သို့သော်ယခုပြီးတော့ပြန်သွားပြီးကျနော်နှင့်အဘယ်ကြောင့်ငါသည်အဦးဆုံးသောအရပျ၌ကဒီမှာလာပြဿနာတွေကိုကိုယ့်ကိုယ်ကိုသတိပေးလိုကူညီပေးဘူး။ သငျသညျတွေအများကြီးသင့်ရဲ့ကိုင်ဆောင်သောချွတ်ရဖို့အများကြီးအတူရှိနေပါသည်။ အတော်များများကရေးသားချက်များထို့ကြောင့်လျစ်လျူရှုနေကြပါတယ်။ ငါထင်ကြလိမ့်မယ်အဖြစ်ဒါပေမယ့်အဖြစ်အများအပြားမဟုတ်။ တစ်ဦးက post ကိုသူတို့လုပျလုနီးပါးဘယ်တော့မှ, တစ်စုံတစ်ဦးကသူတို့အကြာတွင်တစ်ခုခုသတင်းပို့လိမ့်မယ်လို့ပြောပါတယ်ရင်တောင်2ရက်ပေါင်းထက်ပိုမိုများအတွက်သက်ဆိုင်ရာအဲ့ဒီအချိန်မှာဘူး။ ဤအမှုအရာတို့ကိုလက်ခံနိုင်ဖွယ်ရှိပါတယ်။ အဘယ်သို့ငါရပ်ရွာထဲတွင်နားလည်မ downvotes ဖြစ်ကြသည်။ သငျသညျအရာတစ်ခုခုကိုမကြိုက်ဘူးလျှင်ငါနားလည်နိုင်ပါသည်, သို့သော်ကြောင့် downvote မှခိုင်ခိုင်လုံလုံမဟုတျပါဘူး။ Downvotes သင်တို့နှင့်အတူအပုဂ္ဂိုလ်ရေးပြဿနာရှိဆီလျှော်သို့မဟုတ်ညစ်ညမ်းဖြစ်ကြောင်းပို့စ်များ, မဟုတ်သူတွေကိုအဘို့ဖြစ်သင့်သည်။ ဒီလိုမှမဟုတ်ရင်သင်ရုံ trolling ပါတယ်။ သင်တစ်ဦးပို့စ်တစ်ခုပြဿနာရှိပါကမှတ်ချက်ပေးရန်နှင့်သင့်အကြောင်းပြချက်ရှင်းလင်းစွာပါစေ။
အဆိုပါတံဆိပ်။ သငျသညျကိုသတိပြုမိကြပေမည်နှင့်အမျှငါသည်ငါ့တံဆိပ်ထုတ်လွှင့်ကြပါဘူး။ ငါ7ရက်ပေါင်းအကြောင်းကိုသူကအမိန့်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒါကဖြစ်ပြီး, ငါသည်သူတို့မလျှောက်ထားသောနေ့ရက်ကာလကိုထက်ငါသည်ငါ့စတင်နေ့စွဲအဖြစ်ထဲသို့ဝင်ရက်စွဲပေါ်မှာငါ့ကိုထားတော်မူ၏။ Bastards ။ ဒါပေမယ့်ကိုယ်ကတကယ်ကောင်းတစ်ဦးအရာရဲ့စဉ်းစားပါ။ ငါအရေးကြီးသောရက်စွဲများ, 30 ရက်, 45 ရက်, 60 ရက်ပေါင်းနှင့် 90 ချမှတ်ချက်ချသည်။ ထိုအချိန်ကာလ၏ကျန်များအတွက်အမှန်တကယ်ငါတကယ်အပေါ်ဘာနေ့၏မထင်မငါ့ကိုကူညီပေးခဲ့သည်။ ပိုကောင်းကြောင့်ကြီးမားတဲ့သဘောတူညီချက်စေပေမယ့်ငါတံဆိပ်မှပူးတွဲတချို့မာနထောင်လွှားရှိမယ့်နားမလည်ရန်။ မည်သို့ပင်သင်တို့အဘို့အလုပ်ဖြစ်တယ်, ဒါပေမယ့်သင်တို့ရှေ့မှရုန်းကန်င့်လျှင်, ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးသင့်ရဲ့တံဆိပ်အကြောင်းကိုကိုယ့်ကိုကိုယ်အကြောင်းပိုမိုနှင့်လျော့နည်းစိတ်မပူပါနဲ့။
passive vs. လုပ်ဆောင်ချက်: "ငါသည်အင်အားကြီးနိုင်ငံတွေရှိ", "ငါဒါယုံကြည်မှုပါပဲ", "ငါလူမှုရေးအရကလူစကားပြောနိုင်ပါတယ်", "ငါသည်ကိုယ်အကြောင်းကိုပိုကောင်းခံစားရ" - ဤ nofappers အပေါငျးတို့သပုံမှန်အတွေ့အကြုံများဖြစ်ကြ၏။ မိမိတို့ကိုယ်ကိုဤနည်းကိုဖော်ပြအကြောင်းကိုအရာတစ်ခုမှာသူတို့့မှုသည်ဤအရာတို့ကိုကြုံတွေ့ခံစားခဲ့ကြသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ဒါကဖြစ်ပါသည်, သူတို့ nofap စတင်ခဲ့ပြီး, ဤအမှုအရာပဲသူတို့အဘို့အဖြစ်ပျက်ခဲ့သည်။ ကြောင်းသင်တို့အဘို့အဖြစ်ပျက်မှန်လျှင်, အကြီး။ သို့သော်သင်တို့အပေါ်မှာအလုပ်လုပ်ရှိစေခြင်းငှါဤခရီးမှာများစွာသောအမှုအရာရှိပါသည်။ သငျသညျကလူစကားပြောရုန်းကန်နေလျှင်, nofap က၏ကိုယ်ပိုင်အပေါ်ကိုကူညီပေမယ့်တချို့ Self-အကူအညီနဲ့စာအုပ်တွေဖတ်နေသို့မဟုတ်ပဲထွက်ရှိရတဲ့နှင့်လက်တွေ့တက်တက်ကြွကြွကကိုယ့်ကိုကိုယ်တိုးတက်စေရန်သင့်အားအတင်းသွားစေနိုင်သည်။ သင်အကြွေးပေးပါဘူးဘယ်မှာတက်ကြွစွာသင်၏အသက်တာကိုပြောင်းလဲ ပတ်သက်. ရှုပ်ထွေးအရာဖြစ်၏။ ဥပမာအားဖြင့်, ငါ nofap စတင်ခင်အားကစားခန်းမဖြတ်ပေမယ့်ငါတာရှည်သောကာလ၌ပြုကြပြီထက်ပိုထွက်အလုပ်လုပ်နေခဲ့ကြရတယ်။ အခုတော့ငါသညျဤအကြောင်းမှာ nofap ၏ဖြစ်ပါသည်, သို့မဟုတ်ကျွန်မတက်ကြွစွာထုတ်လုပ်ကိုင်ဖို့ရှေးခယျြသောကြောင့်ဤအဆိုနိုင်ကြောင်းပြောပါနိုင်ဘူး။ ဒါဟာတကယ်အရေးကြီးတဲ့အရာငါဒီငါ၏အကျင့်ကြောင်းကိုခံစားမိလိုပိုထွက်အလုပ်လုပ်တာနှင့် nofap ဤသည်၌ငါ့ကိုပြန်ကိုင်မထားဘူးဒါပေမယ့်ငါကဘယ်လောက်အကြွေးပေးရမယ့်တာကြောင့်ဖြစ်တယ်, အရေးမပါဘူး တစ်ခုခုကို။ သငျသညျနှစ်ဦးစလုံးသောအရာတို့ကိုတွေ့ကြုံခံစားသင့်ပါတယ်။ သင်တို့အပေါ်မှာအလုပ်လုပ်နှင့်ပေါ်မှာအလုပ်လုပ်ချင်တစ်ခုခုကိုရှာပါ။ နောက်ပိုင်းပေါ်, သင်ရုံ nofap ၏ရလဒ်အဖြစ်လတ်တလောတွင်လာသည်ဟုသင်မျှော်လင့်မကတခြားအကျိုးခံစားခွင့်ရှိသည်တွေ့ပါလိမ့်မည်။ ငါ့အဘို့ကကွဲပြားခြားနားကမ္ဘာကြီးကိုမြင်နေခဲ့ပါတယ်။
အင်အားကြီးနိုင်ငံတွေ: ငါ့ကိုယုံကြည်ကိုးစားနေတဲ့စူပါပါဝါမရှိ, ရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖြစ်ကြပါစို့။ ထိုသို့လမ်းခံစားရဘာဖြစ်လို့သို့သော်လည်းငါသည်နားလည်နိုင်ပါတယ်။ သင်, ပိုကောင်းတဲ့အိပ်ပျြောရှငျနိုးနှင့်ဤမျှလောက်ပိုပြီးယုံကြည်မှုနှင့်အတူဘဝကိုပျော်မွေ့။ အကြှနျုပျ၏ကိုယ်ခံစွမ်းအားစနစ်လည်းတိုးတက်ခဲ့ကြပုံ, သင်မူကားရုတ်တရက်အခန်းများတွင်အများဆုံးယုံကြည်စိတ်ချကောင်လေးမဟုတ်ပါဘူးလျှင်အံ့ဩခြင်းမပါဘူး။ သငျသညျရိုးရှင်းစွာယုံကြည်မှုခန္ဓာကိုယ်ကိုယ်ဟန်အနေအထားချမှတ်အသုံးပြုပုံ nofap မှသီးခြားစီသင်ယုံကြည်ကိုးစားတိုးတက်စေနိုင်သည်, သင့်ကိုယ်သင်ယုံကြည်မှုအပြည့်ခံစားရပါစေ။ ငါစိတျအပိုငျးနှစျခုအတွက်ဒီအပေါ်တစ်ဦးအကြီးအကို TED ဟောပြောပွဲမှ link တစ်ခုရှိသည်။ နှင့်ပြုံးနေ။ သငျသညျပျြောရှငျမှုနှင့်အတူပြုံးပေါင်းသင်းဒါကြောင့်သဘာဝပြုံးနေသငျသညျ, ပျြောရှငျပိုပြီးဖြေလျော့ပေးခြင်းကိုမှန်ကန်စေသည်။ တဖန်သင်တို့ပျော်ရွှင်ဖြစ်သင့်, သင်ကိုယ်တိုင်တိုးတက်အောင်အပေါ်မယုံနိုင်လောက်အောင်ခက်ခဲအလုပ်လုပ်ကိုင်နေကြသည်, သင်သည်ထိုအကြောင်းကိုအကောင်းခံစားထိုက်နှင့်ယေဘုယျအားဖြင့်ဘဝအကွောငျး။
အပြာရောင်ဘောလုံး: ရက်ပေါင်းတစ်အချို့ငွေပမာဏပြီးနောက်, သင့်လိင်တံကိုသင်ခဲယဉ်း mode ကိုပေါ်တာပေါ့အထူးသဖြင့်လျှင်, အလွန်အထိခိုက်မခံဖြစ်လာပေမည်။ ငါအခြေအနေမျိုးထက်ရွေးချယ်မှုအသုံးပြုပုံခက်ခဲ mode ကိုအပေါ်မှာငါ့ 90 ရက်ပတ်လုံးပါတယ်။ ဒါဟာရိုးရှင်းစွာသင့်ရဲ့ဒစ်ကိုထိ edging တစ်မျိုး, သင်မတော်တဆသမျှသင့်ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေအစွန်းမှကိုယ့်ကိုယ်ကိုဆောင်ကြဉ်းပေးနိုင်ရှိရာအမှတ်ရစေနိုင်သည်။ & Odds သင့်ရဲ့ nofap ခရီးအချို့အဆင့်မှာသငျသညျ vasocongestion (အပြာရောင်ဘောလုံး) ကိုတွေ့ကြုံခံစားကြလိမ့်မည်, ဖြစ်ကြသည်။ ငါကဖယ်ရှားပစ်ရတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်တစ်ခုတည်းသောနည်းလမ်းအအေးမိရေချိုးခန်းတာ, ငါ့လက်၌ cupping, ချမ်းရေဖမ်းရုံထဲသို့ငါ့အမအင်္ဂါအတင်းအကျပ်အားဖြင့်ဖြစ်ပါသည်။ ၎င်းသည်စံပြရောဂါပျောက်ကင်းမဟုတ်ပါဘူး။ ဒါဟာအဆင်ပြေနှင့်ပျော်စရာမဟုတ်ပေမယ်မအပြာရောင်ဘောလုံးဖြစ်ကြသည်။ အေးရေချိုးခန်းထဲမှာရေပန်းယေဘုယျအားဖြင့်ကူညီပေးနိုင်ပါသည်, ဒါပေမယ့်ငါကဒီမှာသို့သွားဘူးကြောင်းပေါ်ပိုကောင်းရေးသားချက်များရှိပါတယ်။ FYI, vasocongestion အဖြစ်ကောင်းစွာအမျိုးသမီးတွေအတွက်ထိခိုက်စေနိုင်ပါတယ်, ငါ၏အင်တာနက်သုတေသနအရသိရသည်ယောနိ၏အစေ့, labia နှင့်ပြင်တတိယသက်ရောက်သည်။ ဘယ်ကိုလည်းအအေးရေချိုးခန်းထဲမှာရေပန်းလည်းမိန်းမတို့အဘို့ရောဂါပျောက်ကင်းအဖြစ်အလုပ်လုပ်ငါတို့ရှိသမျှသည်အပြီးဒါကွဲပြားခြားနားနေမှန်းကြောင်းအတည်ပြု။
စိုစွတ်သောအိပ်မက်များ: စိုစွတ်အိပ်မက်ကသဘာဝဖြစ်ကြသည်။ ရှုပ်ထွေးပေမယ့်သဘာဝက။ ကျနော်တို့ကကျနော်တို့ပြောင်းလဲခဲ့ကြပုံ, ပိုလတ်ဆတ်ရေကူးဘို့အလမ်းဖြစ်စေအဟောင်းသုက်ပိုးဖယ်ရှားပစ်ရရန်ရည်ရွယ်လျက်ရှိသည်။ သို့သျောကြှနျုပျတို့အမြိုးမြိုးပျက်ကွက်နှင့်အတူသုတ်ရည်လွှတ်ပေါင်းသင်းတတ်ရန်သင်ယူဤသို့ပြု။ ဤနေရာတွင်အချို့လူများသည်တစ်ဦးစိုစွတ်သောအိပ်မက်မလိုဘဲတပြင်လုံးကိုအချိန်သွားကြဖို့ရည်ရွယ်။ ဒါကသူတို့ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ဖြစ်တယ်, ဒါကြောင့် willpower နှင့်အတူဖြစ်နိုင်ပေမယ့်ဖြစ်နိုင်ကြောင်းကျန်းမာမဟုတ်ပါဘူး။ ကျနော်တို့ညစ်ညမ်းမှာကိုကြည့်ဖို့စုံစမ်းသွေးဆောင်ခြင်းကိုခံနေနိုင်အောင်သတိရပါ yourbrainonporn.com တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေခြင်းမရှိဘဲသွားကြဖို့ကျွန်တော်တို့ကိုအကြံပေးအဓိကအကြောင်းရင်းဖြစ်ပါတယ်။ ညစ်ညမ်း, အထူးမြန်နှုန်းမြင့်အင်တာနက်ညစ်ညမ်း, ပြဿနာဖြစ်ပါတယ်။ သုတ်ရည်လွှတ်ပြဿနာမဟုတ်ပါဘူး။ ဟုတ်ကဲ့, သင်ထားတဲ့သုတ်ရည်လွှတ်အတွက်အနည်းငယ်အာဟာရဆုံးရှုံး, သင်မူကားကောင်းတစ်ဦးအစားအသောက်များတွင်နှင့်အချို့သောဗီတာမင်နှင့်အတူရှိသူများကိုအစားထိုးနိုင်ပါတယ်။ Yourbrainonporn.com စိုစွတ်သောအိပ်မက်တစ်ဦးပျက်ကွက်မဟုတ်အလွန်ရှင်းပါတယ်။ ဒါပေမယ့်တချို့လူတွေကတစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေများအတွက်ခလုတ်အဖြစ်စိုစွတ်သောအိပ်မက်ကိုကြည့်ပါ။ ငါကျင့်ချင်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရကျွန်မစေးကပ်ရှုပ်ထွေးအတွက်နိုးထပြီးခဲ့သည့်အရာနောက်တဖန် ejaculate ဖြစ်ပါတယ်, ဒါပေမယ့်ဤလူသူတို့အဖြစ်ကောင်းစွာသတိရှိရှိပြန်ပြုစေခြင်းငှါတွက်ဆဒါကြောင့်သူတို့ ejaculated င့်ကြောင်းမြင်သောမရကြဘူး။ ငါလုပျနိုငျသမြှတို့သငျသညျသွေးဆောင်မှုကိုပြန်လည်အကြှနျုပျ၏စိတျအပိုငျးကိုရည်ညွှန်းသည်ပတ်လည်နည်းလမ်းတွေရှိပါတယ်။ FYI, ငါသည်စောစော3ရဲ့, စောစော 90 ရဲ့ 58 နေ့ရက်ကာလ၌ 70 စိုစွတ်သောအိပ်မက်, နေ့ 80, နေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ လုံးဝ Non-လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်သုတ်ရည်လွှတ်ထိုကဲ့သို့သောဘတ်စ်ကားပေါ်နှင့်အနောက်တိုင်းထိုင်လျက်အဖြစ်မျှမျှတတရှက်စရာသောနေရာများအတွက် Weirdest အိပ်မက်အဖြစ်ကောင်းစွာ။
အပိုင်း ၂ - http://www.reddit.com/r/NoFap/comments/2lrrqf/1_day_report_part_two_farewell_and_links/
သွားတော့မယ်: ငါသည်ဤအသိုင်းအဝိုင်းထွက်မယ်။ ဟုတ်ပါတယ်, ငါကိုထပ် masturbating start သွားငါဆိုလိုဘူး။ ငါမ masturbate ရန်လိုအပ်ကြောင်းမခံစားရပါဘူး, ကျွန်မအလွယ်တကူအခြား 90 ရက်ပေါင်းသွားနိုင်ခံစားရပေမယ့်ငါ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုဘယ်တော့မှဖြစ်ခဲ့သည်။ ငါ edging ပါဝငျကွောငျး, Multi-orgasm ဖြစ်လာရန်လေ့လာသင်ယူဖို့ကြိုးစားနေပါ၏။ ဤသည် 90 ရက်ပေါင်းငါ၏အ ED ကုသပေးဖို့ဖြစ်ခဲ့သည်။ ငါသေးကြောင်းသက်သေပြရန်အတွက်လိင်ခဲ့ကြပြီမဟုတ်သော်လည်းဒါဟာအကြီးအကျယ်, ကုသဖြစ်ပါတယ်ခံစားရတယ်။ အစဉ်အမြဲငါနောက်တဖန် porn ကိုကြည့်ဖို့ရည်ရွယ်ကြပါဘူး။ ငါစောင့်ကြည့်ဖို့ငါ့ကိုသွေးဆောင်တော်မူတစ်ခုတည်းသောညစ်ညမ်းဗီဒီယိုဆန္ဒပြပွဲများနှင့်အတူ, pornstars အားဖြင့် run အမျိုးသမီးတွေ orgasm, ပေးကမ်းခြင်းအကြောင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအစီအစဉ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ငါကျရှုံးခြင်းအဖြစ်မြင်ရလိမ့်မယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ငါအရှင်ဝေးကရှောင်ရှားကြခြင်းနှင့်ငါနေဆဲနေပါစေငါဖြစ်စေခြင်းငှါ, ဘယ်လိုစပ်စုသောကြောင့်စောင့်ကြည့်ဖို့မလိုဘူးလို့ထင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်, ငါ၏တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေသည်ယခုအခါအလွန်ကွဲပြားခြားနားဖြစ်သွားသည်။ ဒါဟာ lubricated လိမ့်မယ်, ငါ့ကိုယ်ပိုင်အပျော်အပါးအပေါ်အာရုံစူးစိုက်တာဖြစ်ပါတယ်, ကျနော် fantasize ဖို့မသည်ငါ့အကောင်းဆုံးကြိုးစားပေမယ့်ရုံငါသည်ငါ့လိင်တံနှင့်ကိုယ့်ကိုကိုယ်ပေးကမ်းတာအပျော်အပါးအာရုံစိုက်ပါလိမ့်မယ်။ သင်တော့ဘူးဆက်ပြီးမနိုင်နှငျ့သငျ nofap အပေါ်အရှုံးမပေးတာပေါ့ရှိရာအမှတ်ရနေလျှင်, ငါသည်ဤလမ်း masturbating အကြံပြုချင်ပါတယ်။
မေး။ ။ သင်၏ ED ကိုကုသဖို့ဘယ်လောက်ကြာမလဲ။ မင်းစမ်းကြည့်ပြီးပြီလား။
အဖြေ: ၎င်းကိုစမ်းသပ်ခြင်းမရှိသေးသော်လည်းလေပြင်းမုန်တိုင်းတိုက်သည့်ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်သို့ကျွန်ုပ်ပြန်မရောက်တော့ပါ၊ သို့သော်ကျွန်ုပ်၏စွမ်းဆောင်နိုင်မှုအပေါ် ၅၀ ပြည့်လွန်နှစ်များအထိယုံကြည်စိတ်ချမှုရှိခဲ့သည်။ သို့သော်ကျွန်ုပ်သည်အသက် ၁၈ နှစ်မတိုင်မီအထိအွန်လိုင်းညစ်ညမ်းမှုကိုတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းမပြုခဲ့သည်ကိုနားလည်ပါ။ (စင်္ကြံတွင်ကွန်ပျူတာတစ်လုံးမျှသုံးသည်)၊ ထိုနောက်၌ပင်ကျွန်ုပ်သည်စိတ်ကူးနှင့်မှတ်ဉာဏ်ကိုပိုမိုနှစ်သက်သည်။ သင်အင်တာနက်ညစ်ညမ်းမှုနှင့်စတင်ခဲ့သည့်အသက်အရွယ်နှင့်အသုံးပြုခဲ့သည့်နှစ်နှင့်ဆက်စပ်မှုရှိသည်။ အချို့လူများက ၅ လသို့မဟုတ်ထိုထက်ပိုကြာသော်လည်းကျွန်ုပ်သည် ၉၀ တွင်ကျွန်ုပ်လုပ်လိမ့်မည်ဟုကျွန်ုပ်ယုံခဲ့သည်။ ဒီတနင်္ဂနွေကိုငါရှာကောင်းတွေ့မည်။
links: ဝဘ်ဆိုဒ်များ, ထုတ်ကုန်များနှင့်ကျွန်မဒီခရီးစဉ်အတွင်းအသုံးဝင်သောတွေ့ပြီ nofap မှတ်ချက်များအားငါဘာမှအပေါ်တစ်ဦးကော်မရှင်မရကြဘူး:
အထဲကအလုပ်လုပ် - http://www.hundredpushups.com - အခမဲ့။ ၇ ပတ်အတွင်း pushups ၁၀၀ ကိုမည်သို့လုပ်ရမည်ကိုလေ့လာခြင်း။ စျေးကြီးသောအားကစားရုံအသင်းဝင်ကြေးအတွက်မလိုဘဲကြံ့ခိုင်မှုကိုတည်ဆောက်ရန်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်သည်။ ၇ ပတ်လောက်ကျွန်တော်သံသယ ၀ င်တယ်၊ ရက်သတ္တပတ် ၅ ရက်နေ့မှာ ၄ ပတ်နေခဲ့ရတယ်၊
သှေးဆောငျခွငျး - http://www.reddit.com/r/NoFap/comments/1itc0r/your_ways_to_stop_yourself_from_relapsing/ - သွေးဆောင်မှုကိုမည်သို့တွန်းလှန်နိုင်ကြောင်းအကြံပေးသည့် nofappers များ။
အေးမိုး - http://wakeup-world.com/2012/04/11/ten-health-benefits-of-cold-showers/ - အအေးမိသောမိုးရေ၏အကျိုးကျေးဇူးနှင့် ပတ်သက်၍ ဆောင်းပါး။ ဒီခေါင်းစဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအွန်လိုင်းနှင့်အခြား nofappers များထံမှအကြံဥာဏ်များစွာရရှိနိုင်သည်။
အဆိုပါဦးနှောက် Fog ဆုံးရှုံး - http://www.reddit.com/r/NoFap/comments/1ih1tt/reversed_attraction/ - ဦး နှောက်မြူမှုန်ကိုဖယ်ထုတ်ခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ ကျွန်ုပ်၏အတွေ့အကြုံမှာရက်ပေါင်း ၃၀ ကြာလျှင်၎င်းသည်ထပ်မံတပ်ဆင်မည်ဟုထင်ခဲ့သည်၊ ငါ့ကို
အမျိုးသမီးများနေ့ Up ကိုကောက်နေ - http://www.amazon.com/Models-Attract-Women-Through-Honesty/dp/1463750358 - အမျိုးသမီးများအားဆွဲဆောင်ခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ ကျွန်ုပ်ဖတ်ဖူးသမျှအကောင်းဆုံးစာအုပ်။ ငါတော်တော်များများယောက်ျားတွေ r / seduction ကိုသွားတာ၊ ဒါမှမဟုတ် PUA လှည့်ကွက်အချို့ကိုလေ့လာချင်တာသိလား ငါအရင်ကပစ်ကပ်အနုပညာရှင်လမ်းကြောင်းကိုဆင်းခဲ့ကြ အကယ်၍ သင်သည်ဤအရာများကိုလေ့လာရန်ရွေးချယ်ပါက၊ သင်သည်မည်သည့်နေရာတွင်နေထိုင်သည်နှင့်အမျှအမျိုးသမီးများအားအိပ်ရာပေါ်သို့တင်ရန်ဆန္ဒမရှိခြင်းအတွက်မိမိကိုယ်ကိုစည်းမျဉ်းများချမှတ်ရန်သတိရပါ။ ငါ့မှာအရမ်းချစ်တဲ့အစ်မတစ်ယောက်ရှိတယ်၊ ကောင်လေးတစ်ယောက်ကသူမကိုဒီနည်းပညာကိုသုံးဖို့ကြိုးစားနေတာကိုငါကြားခဲ့ရင်ငါ့ကိုစိတ်မကောင်းဖြစ်မိမှာပါ။ အကယ်၍ ၎င်းသည်ပုံမှန် PUA နည်းစနစ်ဖြစ်ပါကအလေးသာမှုများသည်ကျွန်ုပ်ကိုစိတ်ရှုပ်ထွေးစေလိမ့်မည်။ ပုံမှန်ပရောပရည်ပြုလုပ်ခြင်းသည်မှားသည်မဟုတ်သော်လည်း၊ PUA သည်သင်မဟုတ်သောအရာဟုဟန်ဆောင်ခြင်းကိုအလေးအနက်ထားသည်။ Manson ၏စာရေးသားခြင်းနှင့် ပတ်သတ်၍ မည်သည့်အရာကမျှအခြား PUA ပစ္စည်းများနှင့်မတူဘဲ၎င်းအားအသုံးပြုခြင်းအပေါ်ကျွန်ုပ်အားမသန့်ရှင်းမှုဖြစ်စေသည်။ ဒီစာအုပ်ကသင့်ကိုတကယ့်လှည့်ကွက်တွေသင်ပေးမှာမဟုတ်ဘူး၊ ဒါပေမယ့်အဲဒါထက်အများကြီးပိုအသုံးဝင်ပါလိမ့်မယ်၊ ပြီးတော့အဲဒီမှာရှိပစ္စည်းအများစုထက်အများကြီးသက်သာတယ်။ ခင်ဗျားရဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေနဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုရိုးသားတာပါ။ စာလုံးပေါင်းနှင့်သဒ္ဒါအမှားများကိုလျစ်လျူရှုပါ။ လုံးဝဆက်စပ်မှုမရှိသော်လည်း Woody Allen ၏ Vicky Cristina Barcelona မှ http://www.youtube.com/watch?v=GIi7unlcsTQ မှမြင်တွေ့ရသည့်မြင်ကွင်းကောင်းတစ်ခု။ ဟုတ်ပါသည်။ သင်သည် Javier Bardem ကဲ့သို့လိင်မဆက်ဆံသူဖြစ်သော်လည်းသင်မတတ်နိုင်သောတစ်ခုတည်းသောအရာ ဒီမှာသူ့ကိုစွပ်စွဲမရိုးသားမှုဖြစ်ပါတယ်။ ယောက်ျားကသူလိုချင်တာကိုသိပြီးသွားရှာတယ်၊ မိန်းမလိုပဲ၊ Mark Manson ရဲ့စာအုပ်ကသင့်ကိုအဲဒီလိုလူမျိုးလိုတွေးဖို့ကူညီပေးတယ်။ စသည်တို့ကိုမည်သို့လေ့လာရမည်ကိုသိရှိရန်အသုံးအနှုန်းများကိုလေ့လာခြင်းထက် ပို၍ အသုံးဝင်သည်။
သင့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဘာသာစကားများတိုးတက်စေူခင်း - http://www.ted.com/talks/amy_cuddy_your_body_language_shapes_who_you_are.html သင်၏ခန္ဓာကိုယ်ဘာသာစကားသည်သင်၏ဘဝအပေါ်အကျိုးသက်ရောက်ပုံနှင့် ပတ်သက်၍ စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းသောဆွေးနွေးချက်ဖြစ်သည်။
ကိုယ်ပိုင်အကူအညီတှေးတောဆငျခွလုပ်ငန်းစဉ် - http://www.amazon.com/Presence-Process-Healing-Journey-Awareness/dp/0825305373 - အခြား ၀ တ္ထုတစ်ပုဒ်အနေဖြင့်သူသည်ဘာဝနာကိုလေ့လာပြီးနောက်ရှည်လျားသောစိုက်ထူမှုများကြုံတွေ့နေရသည်ဟုပြောကြားခဲ့သည်။ ငါအဲဒီအချိန်က flatline ထဲကရဖို့အပူတပြင်းဖြစ်ခဲ့သည်။ ရေရှည်စိုက်ထူနိုင်ခြင်းသည်ယခုအချိန်အထိကျွန်ုပ်၏အတွေ့အကြုံမဟုတ်ပါ။ (တရားအားထုတ်ရန်အချိန် ၂ ပတ်မှစိတ်ကူးယဉ်ခြင်းနှင့်အာရုံစူးစိုက်ခြင်းခံရသောအခါကျွန်ုပ်သည်ပိုမိုတိုတောင်းသောအတွေ့အကြုံများကိုခံစားခဲ့ရသော်လည်း) ကျွန်ုပ်ရောက်ရှိနေခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ ပိုမို၍ ပိုမိုသတိထားမိလာသည်။ သတိထားပါ၊ ဒီဟာကခက်ခဲတဲ့လမ်းကြောင်းတစ်ခုပါ။ ကတိက ၀ တ်လိုအပ်တယ်၊ ငါသီတင်းပတ်နှစ်ပတ်လောက်မှာပဲ၊
multi orgasm Lover - http://multiorgasmiclover.com/?hop=bensnblest - ဒေါ်လာ ၆၇ ကျသင့်သည်။ ငါတကယ်ဒီအရောင်ရောင်းအားဗီဒီယိုများကိုမုန်း၏။ အမြဲတမ်းတူညီတဲ့၊ သင်တကယ်လိုအပ်သည်ထက် ပို၍ ရှုပ်ထွေးပြီး၊ အချိန်အကန့်အသတ်ရှိတဲ့၊ သင်သိတဲ့အလွန်အမင်းအရောင်းအ ၀ ယ်နည်းဗျူဟာသာ BS ပြည့်စုံတယ်။ ဒါပေမယ့်ဒီသင်တန်းကိုငါကြိုက်တယ်။ အကယ်၍ သင်ဗွီဒီယိုကိုကျော်။ ဝယ်ယူလိုပါက၊ စာမျက်နှာကိုပြန်ဖွင့်ရုံသာဖြစ်သည်။ ဤသည်မှာအော်ဂဇင်စ်အမျိုးစုံသောလူတစ် ဦး ဖြစ်လာရန်ဖြစ်သည် သင်သည်ဤသင်တန်းကိုတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေဖို့လိုသည်၊ ကျွန်ုပ်သည်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းမလုပ်ဘဲလေ့ကျင့်မှုများပြုလုပ်နေသည်၊ သို့သော်တစ်ချိန်ချိန်တွင်သင်သည်၎င်းကိုလေ့လာရန်ရှေ့တန်းတင်ရန်လိုအပ်သည်။ သငျသညျ edging ပြီးသားသို့မဟုတ်သင်မကြာမီ nofap အပြီးသတ်သွားလျှင်, ကသွားပေးပါ။ သင် nofap ကိုအမြဲတမ်းလုပ်ရန်စီစဉ်နေလျှင်သင်၏အချိန်သည်မထိုက်တန်ပါ။ ငါဒီသင်တန်းအပေါ် ED အပေါ်ဆုကြေးကြောင့် nofap မှသာလာ၏။
NoFap နှုတ်ဆက်ပါတယ်, လေးစားမှု, ချစ်ခြင်းနှင့်တကွကိုယ့်ကိုယ်ကိုဆကျဆံ, သင်၏ကတိကဝတ်အားဂုဏ်ပြုသတိရပါ။ ငါတုံ့ပြန်သင့်တယ်မဆိုမေးခွန်းများကိုသို့မဟုတ်မှတ်ချက်များရှိပါတယ်ရုံကိစ္စတွင်အတွက်လာမယ့်ရက်အနည်းငယ်န်းကျင်ရှိလိမ့်မည်။ အဲ့ဒါအပြင်ငါနောက်တဖန်ဤပြည်သို့ပြန်ရသောရှိသည်ဘယ်မှာတစ်ပြည်နယ်အတွက်တက်အဆုံးသတ်ဘယ်တော့မှမျှော်လင့်ပါတယ်။
LINK - 90 နေ့အစီရင်ခံစာ, အပိုင်းတစ်ခုမှာ (အလွန်ရှည် 3,000 စကားလုံးများကို, ဒါပေမယ့်သင်တို့အဘို့ကဏ္ဍများသို့ကျိုးပဲ့)